ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပျေါထှနျးခဲ့သည့် Pirelli ပြက္ခဒိန်နောက်ဖက်ဇာတ်စင်ပုံများ 2020 - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Homeလောကဥရောပ39 အီတလီပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပျေါထှနျးခဲ့သည့် Pirelli ပြက္ခဒိန်နောက်ဖက်ဇာတ်စင်ပုံများ 2020
03 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 39 အီတလီ, ဥရောပ, လောက, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး 0
ကင်မရာရိုက်ကူးနောက်ကွယ်မှ pirelli ပြက္ခဒိန်ထင်ရှားပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ပေါ်ထွန်းသော
ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပျေါထှနျးခဲ့သည့် Pirelli ပြက္ခဒိန်နောက်ဖက်ဇာတ်စင်ပုံများ 2020 ။ အဆိုပါ Pirelli ပြက္ခဒိန်ယခုဒဏ္ဍာရီနှင့်စိတ်အားထက်သန်စွာပါသေးတယ်ရိုက်ကူး၏ Paolo Roversi 2020 ထုတ်ဝေထွက်ပေါ်လာအီတလီဓာတ်ပုံဆရာတို့ကပြင်ဆင်, နှစ်စဉ်စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော။ 2020 ဆောင်ပုဒ် "ငါသည်နေဆဲငါ့အ Juliet ရှာနေတာနှင့်ရှိသမျှတို့ကိုငါငါ့အသက်ကိုအပေါ်ကိုပဌနာ, Rovers များအတွက်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ဇယားအတိုင်း" Juliet ရှာတွေ့ "။ Juliette အိပ်မက်သောကွောငျ့ ... "သူ commented ။
ပဲရစ်နှင့် 47 Pirelli ပြက္ခဒိန်ပါသေးတယ်ရိုက်ကူး၏ရိုက်ချက်များနေဖြင့်အီတလီဓာတ်ပုံဆရာ Paolo Roversi xnumx'inci ဒီနှစ်မှာတော့ Verona ကျင်းပခဲ့သောပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ထင်ရှား။ ,
အချိန်အကငျြ့ Paolo Roversi ခံစားခဲ့ပါတယ်ကျော်ကြားအီတလီဓာတ်ပုံဆရာရပ်ဆိုင်းရန်, 2020 Pirelli ပြက္ခဒိန် "Juliet ရှာတွေ့" ဟူသောဆောင်ပုဒ်နှင့်အတူရှပ်၏ပဲ့ယူခဲ့ပါတယ်။ မင်းသမီးနှင့်တိုင်းပြည်အဆိုတော်, မေတ္တာနှင့်သူရဲကောင်းများ၏ဒရာမာအားဖြင့်ခံပြီးအဆိုပါ Shakespearean (Şekspiryအဆိုပါ Shakespearean စတိုင်) ၏အစွန်အဖျား, ပါဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓာတ်ပုံဆရာရဲ့ကွဲပြားခြားနားသောယဉ်ကျေးမှုများနှင့်စီမံကိန်းများ, လူငယ်နှင့်အလှအပ၏လမ်းဆုံထံမှလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
9 ကျော်ကြားသောနာမကိုအမှီ Juliet ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအဘို့ရွေးကောက်တော်မူခဲ့သည်
Rovers9လူတွေ Juliet ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအနက်ကိုဘော်ပြမှရွေးယူကြ၏။ ဤလူများသည်ဗြိတိန်မင်းသမီး Claire Foy, မီယာ Goth နှင့်မင်းသမီး Emma Watson ဟာအမေရိကန်ရုပ်ရှင်မင်းသမီး Indy Moore က, Yara Shahidi နှင့် Kristen Stewart က, တရုတ်အဆိုတော်ခရစ် Lee က, စပိနျအဆိုတော် Rosalie နှင့်ပြင်သစ်အီတလီအနုပညာရှင်ရဲ့ Stella Rovers ပါဝင်သည်။ ပဲရစ်စ်နှင့် Verona Rovers ပြက္ခဒိန်တွင်မေလပစ်ခတ်မှုအတွင်းတစ်ပါတ်မှုအတွက် commented: "ငါနေဆဲငါ့အ Juliet ရှာနေတာနှင့်ရှိသမျှတို့ကိုငါငါ့အသက်ကိုအပေါ်ကိုခေါ်ပါ။ "Juliette အိပ်မက်သောကွောငျ့
သူသည်ထင်ရှားရုပ်တုဆင်းတုများ၏လှည်းနိုင်ငံသားများအတွက်ပြန်သေလွန်သောသူတို့သည်အာကာသကနေကျဆင်းသွား 11 / 09 / 2015 Düştüğü vagon boşluğunda ölümden dönen vatandaşın görüntüleri ortaya çıktı :İzmir’in çiğli ilçesinde trene binmek isterken vagon boşluğuna düşen ve ölümden dönen görme engelli vatandaşın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Geçtiğimiz Mayıs ayında İZBAN (İzmir Banliyö Sistemi) Çiğli Ata Sanayi durağında peronda güvenlik görevlisi olmadığından kendi başına İZBAN’a binmeye çalışırken vagonlar arasındaki boşluğa düşen Görmeyen Aydınlar Derneği Başkanı Salih Pelit, yardım istemesine rağmen vagondaki yolcular duymayınca hareket eden trende bir süre çırpındı. İZBAN peronu terk etmeden can havliyle kendini perona atan Pelit, son anda ölümden döndü. Karşıyaka 5’inci Asliye Ceza…
Bakirkoy Metrobus မတော်တဆ (ဗီဒီယို) မြားတှငျပျေါလှငျကြောက်မက်ဘွယ်သောသူပုံများ 19 / 10 / 2015 Terrible Metrobus မတော်တဆ၏ပုံများ Bakirkoy မြားတှငျပျေါလှငျ: အ Factor ဂျစ်ကားမှအတားအဆီး, metrobüslလှဲတိုက်မိ။ အသစ်သောအကြောင်းကို 1 months ago ထငျရှားသောကြောက်မက်ဘွယ်သောရုပ်တုဆင်းတုအနိုင်ရ။ Terrible Metrobus မတော်တဆ၏ပုံတွေကို Metrobus metrobüslလမ်းတိုက်မိဝအတားအဆီးသို့ဂျစ်ကားပျက်ကျတည်ရှိသော Bakirkoy Bakirkoy Incirli မြားတှငျပျေါလှငျ။ အဆိုပါမိုးသည်းထန်စွာ 15လူများမတော်တဆမှုအတွက်ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ 20 အကျိုးအမြတ်စက်တင်ဘာလအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်လုံခြုံရေးကင်မရာပုံရိပ်များသတင်းရေချိုးခန်းထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ထိတ်လန့်၏အတွေ့အကြုံရှိအချိန်လေး၏ Metrobus ဒုတိယကင်မရာတွင်ထင်ဟပ်။
Bursaray ရုပ်တုဆင်းတု (ဗီဒီယို) သည်ထင်ရှားထိတ်လန့်အတွေ့အကြုံ 12 / 04 / 2016 ကင်မရာ Bursa အတွက်မီနီဘတ်စ်၏အကိုင်းအခက်ကိုရပ်တန့် Bursaray ထိုကဲ့သို့သောအချိန်လေးတွင်ထင်ဟပ်: အဆိုပါပုံရိပ်တွေ Bursaray ကြုံတွေ့ဟာထိတ်လန့်ထဲမှာထင်ရှား။ , Bursa အတွက်ဗန်မောင်းသူအခြို့သော Non-16 3118 ပန်းကန်မီနီဘတ်စ်နံနက်ယံ၌အမြန်နှုန်းအဖြစ် 05.00 alamayarak အဆိုပါ Osmangazi Bursaray ဘူတာမှတ်တိုင်အားဖြင့်ဝင်တိုက်ခဲ့သည်။ ဘူတာရုံရဲ့တံခါးဝနှင့် box Office ရဲကိုချိုးဖောက်သဖြင့်ယာဉ်ကိုရပ်တန့်နိုင်ပါ။ ဒါဟာဘူတာရုံမှချွတ်ဖြစ်ဖို့အချိန်ရဲ့ဘယ်သူမှတစ်ဦးဖြစ်နိုင်သမျှကပ်ဆိုးကြီးရှောင်ရှားရှိ၏။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, လုံခြုံရေးကင်မရာများအားဖြင့်ရသောအခါကပ်ဘေးဆိုင်ရာမတော်တဆမှုအလုပ်ခွင်ယခုအချိန်တွင်မှယခုအချိန်တွင်ထံမှမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်။ input ကိုမြေအောက်ရထားဘူတာရုံမြားတှငျပွောငျးလဲနှင့်အတူအိမ်ခြံမြေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတွက်ရရှိလာတဲ့မတော်တဆမှုအပြီးပုံမှန်ပြန်လေ၏။
Metrobus ပုံရိပ်တွေလေရန်ပွဲ (ဗီဒီယို) ၏ဓါးပျေါမှာထငျရှား 24 / 10 / 2016 ဓါးရိုက်ကူးအတွက် Metrobus ရာသီဥတုရန်ပွဲများ၏ပေါ်ထွက်လာ: အ Metrobus ပြီးခဲ့သည့်လကတွေ့ကြုံ, ဓါးရုပ်တုဆင်းတုသူပုံရိပ်တွေအဖြစ်အပျက်ကိုအချိန်လေးပေါ်ထွက်လာဘယ်မှာ Metrobus အတွက်ကင်မရာကိုထင်ဟပ်အဖြစ်ထိုးခရီးသည်အတွက်ကြီးထွားလာဆွေးနွေးငြင်းခုံပြီးနောက်ကြောင့် Metrobus ယာဉ်မောင်းများနှင့် Metrobus ၏လေအေးပေးစက်၏ဆှေးနှေးဖို့သည်ထင်ရှားတိုက်။ Zincirlikuyu Metrobus ရပ်တန့်ဖြစ်ရပ်အတွက်ကြုံတွေ့စက်တင်ဘာလ6အတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ထိုနေ့ရက်သည် Zincirlikuyu-မုဆိုးပထမဦးဆုံးအကြိမ်၎င်း metrobus လုံခြုံရေးကင်မရာများ၏ရောင်ပြန်ဟပ်ပုံရိပ်တွေအကြောင်း, ခရီးသည်လေအေးစက်ဖွင့်ဖို့မောင်းသူကိုပြောပြရောင်ပြန်ဟပ်။ သည်အခြားခရီးသည်များ၏ဆွေးနွေးမှုတွင်ပါဝင်ရန်အရင်ကဆိုရင်ရှိပုံပေါ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးရပ်နားတဲ့ခရီးသည် Metrobus ချွတ်ရတဲ့သည်အထိကြာမြင့်ကြောင်းဆွေးနွေးမှုများ၏ရလဒ်အဖြစ် Metrobus ။ ကားမောင်းသမားနှင့်အတူခရီးသည်များ၏လေဖြတ်ပြီးနောက်ဆွေးနွေးမှုမှာတော့ ...
တူရကီအတွက် YHT မတော်တဆမှုများပုံများထင်ရှား 14 / 12 / 2018 နှစ်ခုရထားကခေါင်းကို-အပေါ်လည်းဒဏ်ရာရသည်ဟုပျက်ကျမှုတိုက်မိခေါင်းအဖြစ်တူရကီ, Yenimahalle ခရိုင်, အမြင့်မြန်နှုန်းရထား (YHT) တွင်စက်ပြင်3ကိုလူများရဲ့အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ပါသည်9လမ်းစစ်ဆေးမှုများတိုက်မှုများအတွက်လမ်းညွှန်လေ့ကျင့်ပေးရန်, 92 လူတွေကမြင်ကြပါတယ်။ တူရကီမြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားဘူတာရုံကနေပြောင်းရွှေ့ရထားစေရန်အချိန်အတွက် 06.30 မှာ Konya မနေ့က, Yenimahalle Marsandiz ဘူတာရုံရထား 06.36 နာရီခေါင်းကို-on ကိုလမ်းပြတိုက်မိ။ မီးတောက်မြင့်တက်နှင့်တိုက်မှုများ၏သက်ရောက်မှုကင်မရာခုံးကျော်တံတား၏ပုံရိပ်များတွင်တွေ့မြင်ကြောင့်လုံခြုံရေးဘူတာရုံများတွင်မီးရထားပေါ်ပြိုကျ။ အဆိုပါသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံဝန်ကြီး Mehmet Cahit Turhan တရားစီရင်ရေးနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုစနစ်ကသံအချက်ပြ။ ဆက်ဖြစ်ပါတယ် "ဟုဆိုသည် ...
1915 Canakkale တံတားပုံရိပ်တွေကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အမျှဝေခဲ့ကြ 17 / 02 / 2017 1915 Canakkale တံတားပုံရိပ်တွေကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အမျှဝေခဲ့ကြသည်: 1915 Canakkale တံတားပထမဦးဆုံးအကြိမ်ထုတ်ဝေခဲ့ကြသည်Çanakkale TRT သတင်းအမြင်အာရုံပုံရိပ်တွေ 1915 တံတား TRT သတင်းကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ ပို့ဆောင်ရေး, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Ahmet Arslan, TRT သတင်းနှင့်အားကစားဆိုင်ရာဦးစီးဌာနမှဥက္ကဋ္ဌ Yasar ရေလွှမ်းမိုး Aries များ၏ဧည့်ခဲ့ပါတယ်။ စီမံကိန်း IMAGES ပထမဆုံးရှယ်ယာပို့ဆောင်ရေး, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Ahmet Arslan, ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးတံတားဖြစ်လိမ့်မည် 1915 Canakkale တံတားအမြင်အာရုံကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတစ်ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွင်ကြေညာခဲ့သည်။ ဒီတော့အခြေခံအားဖြင့်ဧရာစီမံကိန်းတွင်အောင်ပွဲခံ၏မတ်လ 18 အမြင်အာရုံနှစ်ပတ်လည်နေ့အတွက်သိမ်းယူခံရဖို့ပင်လယ်ပြင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အများပြည်သူနှင့်အတူမျှဝေခဲ့သည်။ စီမံကိန်းရဲ့ဧရာမ ...
အစီရင်ခံစာပျေါထှနျးခဲ့ TCDD ပျက်ယွင်းနေ culverts 22 / 06 / 2019 Arifiye Sakarya များတွင်အစ္စတန်ဘူလ်-တူရကီမြင့်မားသောအချိန်အဖြစ်ဆိုးသောမြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားအတွက်အင်ဂျင်နီယာရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုတားဆီး။ အဆိုပါအဖြစ်အပျက်အပေါ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတွေ့ရှိနေရသည်စတင်ခဲ့သည်။ TCDD, ရထားလမ်း၏ကင်ကိုရွှေမလျော်ကန်သောအစီရင်ခံစာအရညှစ်ထားပြီးသတိပြုမိခဲ့သည်ဇွန်လအထက်တန်းမြန်နှုန်းရထား (YHT) လှုပ်ရှားမှုများအတွက်ကြောင့်အလွန်အကျွံမိုးရေချိန်မှရပ်စဲ Sakarya Arifiye ခရိုင် 19, ထိုအကြောင်းအသေးစိတ်ပေါ်ထွက်လာဖို့ဆက်လက်ထင်ရှား။ , Arifiye YHT-Bilecik တည်းခိုသည့်အစ္စတန်ဘူလ်-တူရကီလေယာဉ်ခရီးစဉ်များအကြားဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းမြေပြိုမှုကြောင့်နာရီဝန်ဆောင်မှုထဲက။ Ugur Sahin Birgün'ünနေအစီရင်ခံစာအရ; "Söğütlüçeşme Arifiye ထံမှကြောင့်တူရကီရန်ရွေ့လျားရထားထဲမှာအလွန်အကျွံမိုးရေချိန်မှရပ်တန့်ခဲ့သည်။ ရထားပေါ်တွင်ခရီးသည်" ဟုအဆိုပါလမ်းကြောင့်မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းဖို့ပိတ်ထားသည် ...
ပုံရိပ်တွေမြေအောက်ရထားရန်ပွဲမှထွက်လာသော 21 / 07 / 2015 istanbulkart နှိပ်မှပုံရိပ်များထွက်ရှိ Taksim မြေအောက်လုပ်သားများက Metro ရန်ပွဲအသစ်ပုံရိပ်တွေလုံခြုံရေးအစောင့်တစ်ဦးသေနတ်ဆွဲသောပြောဆိုချက်ကိုအကြောင်းကိုပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ပုံရိပ်တွေ, လုံခြုံရေးအရာရှိတွေကရိုက်နှက်, ကန်ပါးရိုက်သည်ထင်ရှား။ , အဆိုပါဖြစ်ရပ် Taksim Metro အတွက်မကြာသေးမီကရာအရပျကိုယူ။ ရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, အလုပျသမားမြား၏အုပ်စုတစု Taksim ထိုပွဲကိုခံစီးရောက်ကြ၏။ တောင်တက်ပြီးနောက်ပြန်လာရန် Taksim Metro ဝင်လိုသောအလုပျသမား, သူ allegedly istanbulkart နှိပ်စရာမလိုဘဲ turnstile ဖြတ်သန်းစေချင်တယ်။ အလုပ်သမားတွေအပေါ်မှာတင်သောလုံခြုံရေးအရာရှိများနှင့်ဆွေးနွေးပြီးနောက်တိုက်ပွဲသို့လေ။ ဤရွေ့ကားအချိန်လေးလုံခြုံရေးကင်မရာတွင်ထင်ဟပ်လျက်ရှိသည်။ မလုံလောက်ပုံများ၏မျက်နှာကိုအတွက်4လုံခြုံရေးအစောင့်လူအစုအဝေးမှာလူအစုအဝေးအတွက်တည်းခိုနေကြသည်။ Kick ...
အဆိုပါနောက်ကွယ်မှ၏ BTK ရဲ့ချုပ်ရာ, အခွင့်အရေးအား output ကိုအသစ်နည်းလမ်း 18 / 11 / 2014 အဆိုပါနောက်ကွယ်မှ၏ BTK ရဲ့ချုပ်ရာ, output ကိုအသစ်အခွင့်အရေးယူနည်းလမ်း: တချို့ကကန်ထရိုက်တာများကအလွန်နိမ့်ကိန်းဂဏန်းမှာတံတားဆောက်လုပ်ရေးလေလံ၏အပိုင်းအနေဖြင့်, စီမံကိန်း viaduct တစ်ခုလုံးအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏အစိတ်အပိုင်းများကိုတူးနှင့်ဖြည့်စွက်အဘို့အလွန်မြင့်မားကုန်ကျစရိတ်တောင်းဆိုနေကြသည်။ တူးဖော်ကန်ထရိုက်တာများကငွေကိုဆွဲဆောင်သူတို့ကိုဝက်အဆာထွက်ခွာဘို့အလုပ်လုပ်ကြသည်။ ASRIN နှင့်စီမံကိန်းကိုခေါ် output ကိုအသစ်နည်းလမ်းနောက်ကွယ်မှအခွင့်အရေးအားတူရကီအပိုင်း၏လုပ်ရပ်ရပ်တန့်ဖို့သမိုင်းဝင်ပိုးလမ်းမကြီးဟာဘာကူ-Tbilisi-Kars မီးရထားပြန်လည်ရှင်သန်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ စာရင်းစစ်ချုပ်၏တရားရုံးကချမှတ် '' တူး-ဖြည့်ပါ '' ပေးထားသောအမည်ဖြင့်မှဒီနည်းလမ်းကိုသတင်းပို့ပါ။ ထို့ကြောင့်သူကတစ်ဖွဲ့လုံးကတချို့ကန်ထရိုက်တာကြာ ...
2020 Pirelli ပြက္ခဒိန်
ဒေသခံအဓမ္မလုပ်အားပေးခိုင်းစေမှုများရှိဆဲ Zoran အတွက်ရထားလမ်း structures များနယူးစည်းမျဉ်းများစွန့်ခွာလိမ့်မည်ဟု
DP World, ပထမဦးဆုံးမီးရထား loading ၏ဆိပ်ကမ်း၏ထက်ဝက် Medlog ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး Make ခဲ့သည်
Bursaray ရုပ်တုဆင်းတု (ဗီဒီယို) သည်ထင်ရှားထိတ်လန့်အတွေ့အကြုံ
Metrobus ပုံရိပ်တွေလေရန်ပွဲ (ဗီဒီယို) ၏ဓါးပျေါမှာထငျရှား
တူရကီအတွက် YHT မတော်တဆမှုများပုံများထင်ရှား
အစီရင်ခံစာပျေါထှနျးခဲ့ TCDD ပျက်ယွင်းနေ culverts
အဆိုပါနောက်ကွယ်မှ၏ BTK ရဲ့ချုပ်ရာ, အခွင့်အရေးအား output ကိုအသစ်နည်းလမ်း